नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भयो मोबाइल बैंकिङको सुरुवात ? – Janamanch.com
नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भयो मोबाइल बैंकिङको सुरुवात ?
काठमाडौं, २६ पुस- नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय भित्रिएको मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने मानिसको संख्या अहिले २९ लाख ५८ हजार ४१ जना पुगेको छ। ग्राहकको सहजता र क्यासलेस कारोबारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्ययम पनि मोबाइल बैंकिङ हो।
सन् २०१४ मा आएर बल्ल पहिलोपटक मोबाइल स्मार्ट बैंकिङको सुरुवात भएको हो। एफ १ सफ्ट कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सुवास शर्माका अनुसार स्मार्ट बैंकिङको सुरुवात ग्लोबल आईएमई बैंकले गरेको हो। ग्लोबल बैंकले पहिलोपटक इन्टरनेटमा आधारित भएर चल्ने स्मार्ट बैंकिङको सुरुवात गरेको हो। योभन्दा मोबाइल बैंकिङका नाममा भित्रिएका एसएमएस बैंकिङ, मोबाइल मनीलगायत बैंकिङ सेवा सञ्चालन हुने गरेका थिए। मोबाइलमा म्यासज पठाएर ग्राहकलाई जानकारी गराउँदै आएका नेपाली बैंकको बीचबाट फरक रूपमा डेटामा आधारित बैंकिङ सेवाको सुरुवात ग्लोबल बैंकले गरेको हो।
यसलाई मोबाइल बैंकिङको मोर्डन रूपमा पनि हेर्न गरिएको शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा एसएमएसको पठाउँदा लाग्ने पैसा घटेन तर विस्तारै डेटको पैसा घट्दै जाँदा अब डेटामा आधारित मोबाइल बैंकिङको सुरु भएको छ। अहिले नेपालमा पनि डेटामा आधारित मोबाइल बैंकिङ सेवा दिने बैंकको संख्या उल्लेखनीय छ ।